တရုတ် OTOPYYK TOPCP25-25D Creative Hollow LED Screen ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | မျက်လုံး
၁။ နူးညံ့ပြီးသဘာဝ၊ အရောင်
2. မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာရေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားခြင်း၊
3. ညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ ရှည်သောအသက်၊ လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှု၊ အားနည်းမှုနှုန်း
4. မြင့်မားတောက်ပသော၊ နေ့ရောညပါသုံးနိုင်သည်။
အလျားလိုက် ၂၅ မီလီမီတာ Vertica ၂၅ မီလီမီတာ
Drive mode ပါ
AC V ပါ
လည်ပတ်မှု / သိုလှောင်မှုအပူချိန်
ရှေ့ဘက် (သို့) နောက်ဘက်
ပြတင်းပေါက်များ၊ မှန်ကာရံများ၊ ဘားများ၊ ကားပြပွဲများ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများ၊ အားကစားရုံများ၊ ဟိုတယ်များ၊ မင်္ဂလာဆောင်အငှားများ၊ အဆင့်များ၊ ပြတိုက်များ၊ ပြပွဲများ၊ အရောင်းစင်တာများ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများစသည်တို့ကိုပြသပါ။
အမြန်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုတစ်စတုရန်းမီတာလျှင် ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းလူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကတပ်ဆင်နိုင်သည်၊ ရိုးရာအပြင်ဘက် LED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်းထက် ၆၀ ဆပိုမြန်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ပျမ်းမျှပါဝါသုံးစွဲမှုသည် ၂၂၀ သာရှိသည်၊ ၎င်းသည်အခြားကုမ္ပဏီများထက်များစွာသက်သာသည်
အပြည့်အ ၀ လေ ၀ င်လေထွက်ဒီဇိုင်း၊ သဘာဝအပူဓာတ်ဖြန့်ဝေမှု၊ ရိုးရာမျက်နှာပြင်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုကျော်ဖြတ်ရန်၊ ပိတ်ထားသောအာကာသ၏ဧရိယာသည်အပူကိုမစွန့်ထုတ်နိုင်ပါ၊ စနစ်သည် ပို၍ တည်ငြိမ်သည်။
ပြတင်းပေါက်၊ မှန်ခန်းနံရံ၊ ဘား၊ အော်တိုပြပွဲ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ အားကစားကွင်း၊ ဟိုတယ်၊ မင်္ဂလာဆောင်အငှား၊ စင်မြင့်၊ ပြတိုက်၊ ပြပွဲ၊ အရောင်းစင်တာအရောင်းဆိုင်၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊
ပင်လယ်၊ လေ၊ မီးရထားနှင့်သစ်သားကိစ္စ၊ အလူမီနီယံမဟာမိတ်တို့ဖြင့်ထုပ်ပိုးသည်
အများအားဖြင့် ၀ ယ်သူကို ဦး တည်သည်၊ ၎င်းသည်တာဝန်အရှိဆုံး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ရိုးသားသောပံ့ပိုးပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်ရုံသာမက Indoor & Outdoor Transparent LED Display (P15.63/P12.5/P10) အတွက်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်ပါ ၀ င်သည်။ .42/P8.93/P6.25/P5.21mm) ကျွန်ုပ်တို့တွင်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုအတွက်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှိသည်။ ငါတို့ကမင်းကျေနပ်မယ့်ပြသနာကိုဖြေရှင်းမယ်။ မင်းလိုချင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုငါတို့တင်ပြမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားအမှန်တကယ်အခမဲ့ခံစားရရန်သေချာပါစေ။
တရုတ်မှ CED Video Wall အတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်း၊ LED Screen၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးနှင့်ပို့ဆောင်ချိန်ကိုအာမခံရန်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုသုံးပစ္စည်းများလည်းရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ယုံကြည်ခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုမြင့်မားခြင်းနိယာမကိုလိုက်နာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဖောက်သည် ၀ ယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်၊ ၀ ယ်ယူမှုကာလကိုတိုစေခြင်း၊ တည်ငြိမ်သောထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်၊ ဖောက်သည်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး win-win အခြေအနေကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားလိမ့်မည်ဟုအာမခံသည်။
ဟောင်ကောင်နှင့်ရှန်ကျန်း (တရုတ်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု) တွင်ရှိသောအရည်အသွေးမြင့် LED Display ထုတ်လုပ်သောစွမ်းအင်ချွေတာရေးဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ledscreens ၏စတုရန်းမီတာ ၂၀, ၀၀၀ ရှိသည်။ အဆင့်မြင့်အလိုအလျောက်စုစည်းထားသောလိုင်းများနှင့် sealant အခြောက်ခံလိုင်းများတပ်ဆင်ထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Made in China စျေးနှုန်းများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးတို့ဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိနေရာများသို့ LED Display ကိုပို့ဆောင်ပေးနေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုပြင်ပကြော်ငြာမီဒီယာများတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ဟိုတယ်များ၊ မင်္ဂလာဆောင်စင်ငှားရမ်းခ LED display များနှင့်အလှဆင်မှုများအပါအ ၀ င်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုမှတပ်ဆင်မှုမှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအထိစနစ်ကျသောအားသာချက်များ သုံးစွဲသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုထိရောက်စွာလျှော့ချရန်နှင့်ဖောက်သည်များအားပိုမို ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် omni-directional ပေါင်းစပ်ထားသောဖြေရှင်းနည်းများကိုသုံးပါ။
EYELED LIGHTING LIMITED သည်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ ပစ္စည်းများစနစ်စံနှုန်းများကိုစီမံကွပ်ကဲထားပါသည်။ မတူညီသောစျေးကွက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်သည် EYELED မိသားစုမှဖောက်သည်များအားပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမှုတို့ကိုတန်ဖိုးထားသည်။ customer များအတွက်ရေရှည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာ၊ လေ့ကျင့်ထားသော၊ ကျွမ်းကျင် ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရောင်းချခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတာဝန်ယူသည်။ အရောင်းမ ၀ င်မီ၊ ငါတို့သည်အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်နည်းပညာဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကို Insale အားပေးသည်။ ရောင်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှားအတွက်ဂရုတစိုက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ရှန်ကျန်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏တည်နေရာသည်သင်၏ခရီးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးသည်ကိုအာမခံပါသည်။ EYELEDDisplay သည်သင်၏လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော LED ပါတနာဖြစ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
Q1 နမူနာ LED display တစ်ခုကိုမှာယူလို့ရပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းအတွက်နမူနာယူရန်သင့်အားကြိုဆိုပါသည်။ ရောစပ်ထားသောနမူနာများကိုလက်ခံနိုင်သည်။
Q2 leddisplayA အတွက်အနည်းဆုံးမှာယူမှုပမာဏကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။
A: ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်လိုအားနှုန်းချို့တဲ့မှုနှင့်အတူတင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အောက်တွင်ထုတ်လုပ်သည်။ ၂% ။ ဒုတိယအချက်မှာအာမခံကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည် Fordefective အစုငယ်များအတွက်အမှာစာအသစ်များအတွက်အလင်းရောင်အသစ်များကိုပညာ ပေး၍ ၎င်းတို့အားပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးသင့်အားပြန်လည်ပေးပို့လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ခေါ်ဆိုမှုများအပါအ ၀ င်အဖြေများကိုဆွေးနွေးနိုင်သည်။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့ကသုံးနှစ်အာမခံပေးပါတယ်။
Q5 LED display ကိုဘယ်လိုမှာရမလဲ။
A: ပထမ ဦး စွာသင်၏လိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ၊ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တောင်းဆိုချက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုချက်အတိုင်းကိုးကားသည်။ တတိယအနေနှင့် ၀ ယ်သူသည်နမူနာအားအတည်ပြုပြီးတရားဝင်အမှာစာကိုချန်ထားခဲ့ပါသည်။ စတုတ္ထအချက်ကထုတ်လုပ်မှုကိုစီစဉ်တယ်
ယခင်: OTOPYYK TOPCP20-20D Outdoor High Brightness Energy-saving Light Bar မျက်နှာပြင်
နောက်တစ်ခု: OTOPYYK TOPCP31-31D Full Color HD High Vesolution LED Display ဖြစ်သည်
OTOPYYK TOPCP15-15S ပြင်ပမီဒီယာအသစ်ကြော်ငြာခြင်း ...
OTOPYYK TOPCP15-15D Customized Ultra-Thin Smart ...
OTOPYYK TOPCP16-33D တပ်ဆင်ခြင်း HD ရေစိုခံ ...
ပွင့်လင်း p7.8 p15.625 p25 p31.25 p50 ပြင်ပ ...